Norway oo Soo bandhigtay Waqtiga la Qaadayo Xayiraadaha Dalka Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaNorway oo Soo bandhigtay Waqtiga la Qaadayo Xayiraadaha Dalka
April 7, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway 0
Photo Stian Lysberg Solum / NTB
Dowlada Norway ayaa maanta Shaacisay in wadanka loo furayo qeyb qeyb hadii Xaalada ay sidaan ku socoto.
Waxaa si tartiib tartiib ah loo furi doonaa Noorway afar marxaladood kadib faafida waxaana hadafku yahay in dhamaadka bisha Juun, in dhowr jeer laga qafiifiyo xadidaada. Farriintaas ayay ra’iisal wasaare Erna Solberg ka sheegtay Xaruunta Barlamaanka Storting-ka maanta.
Carruurta, dhalinyarada iyo ganacsatada ayaa la siin doonaa mudnaanta iyo gargaarka xiliga Kuleelaha ayuuna dhicidoonaa Furitaanka Badankiisa.
tusaale ahaan, goobaha nasashada booqashooyinka qoysaska ee dibedda ka imanaya, ilaa 200 oo qof oo fadhiisanaya hal Xaflad oo goob gudaha ka dhaceysa.
Dib u furida bulshada waa la qiimeyn doonaa jadwalkana waxaa lagu go’aamin doonaa xaalada faafitaanka cudurka iyo heerka tallaalka ee dalka.